Mombe nezvirimwa: manejimendi manejimendi uye simulation vhidhiyo mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida michina yekufananidza mitambo yemavhidhiyo, uri muhombe. Chokwadi iwe uriko kana unakidzwa neyakakurumbira mota simulator Euro Rori Simulator iyo inowanikwawo kune vashandisi veLinux. Zvakanaka, kana iwe uchitarisirawo kutyaira michina yekurima senge matarakita, vakohwi, nezvimwe, munyika yedhijitari, zvino yauya Mombe nezvirimwa, mutambo wekufananidza wevhidhiyo uye manejimendi yako pachako purazi kwaunozoishandisa semwana mudiki achityaira idzi mota ...
Para mamwe mashoko kuti ungaiwana sei kana kuona zvimwe nezve vanogadzira uye Mombe uye Zvirimwa kana C2C pachayo, unogona kuenda webhusaiti yepamutemo yeprojekti iyi. Vagadziri vayo vakatanga mushandirapamwe wezvemari paKickdstarter uye kubva muna Gumiguru 2016 vakakwanisa kukwidza 173.988 753.178 euros yemipiro, iri mari yakawanda kwazvo. Kubva ipapo vakaenderera mberi nemari kubva kune yepamutemo webhusaiti uye parizvino vane zvinopfuura € XNUMX, saka vane mari yakakwana.
MunaAugust wegore rapfuura yakawedzerwa iyo yeLinux vhezheni padyo neWindows iripo, uye kunyangwe ivo vachiri kushanda pamutambo, rutsigiro runoratidzika kunge rwakanaka. Ivo vanoshandisa injini yeC4 kutamisa iwo maficha, injini yeTerathon, kunyangwe ivo vanogadzira vachiti vakagadzirisa izvi zvakanyanya kuti vashande nezvinhu zvakaita senzvimbo ine simba, zvinomera uye masisitimu emamiriro ekunze anoita kunge anoshanda chaizvo pakuona vhidhiyo.
Haasi munhu wese anovada mhando iyi yemavhidhiyo mitambo uko michina yekurima, zvekuchera kana matiraki zvinobatwa, asi chokwadi ndechekuti aya marudzi eanoteedzera ane vateereri vavo uye hakuna vashoma vanovada kunyangwe vachiita sevanofinha pakutanga. Uine Mombe nezvirimwa unogona kutyaira, sezvandataura, mota dzakawanda nemichina mumunda iwe uchifanira kubata zviwanikwa zvepurazi rako kuti utenge uye uvandudze. Simba remavhidhiyo emavhidhiyo harisi idzva uye rinogona kutiyeuchidza mamwe mavhidhiyo akafanana aripo, akadai seKurima Simulator 2018 yeApple kana pakati pevamwe ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Mombe nezvirimwa: manejimendi manejimendi uye simulation vhidhiyo mutambo